London: TV ga qaranka oo Jaray baahintiisii live ka ahayd markii ay bilaabantay qudbadii Jamal Cali Xuseen | SDWO.COM & SomalilandNews.net
London: TV ga qaranka oo Jaray baahintiisii live ka ahayd markii ay bilaabantay qudbadii Jamal Cali Xuseen
Published on May 19, 2015 by sdwo · No Comments
Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga ucid Jamal Cali Xuseen ayaa shacbiga reer London kala qaybqaadanayey xafladii xuskii 18ka May oo London lagu qabtay habeenkii ay 18ka May soo gelaysay. Xafladan ayaa si toos ah uu TV ga qaranku u soo tebinayey, hase yeeshee wax wax lala yaabo noqotay barnaamijkii live ka ahaa la jaray markii uu Jamal bilaabay hadalkiisa, waxa kale oo lala sii yaabay in barnaamiijkii live ka ahaa dib u bilaabmay markii Jamal ka baxay qudbadii. Jamal oo arinkaas kaga hadlayaana barta uu ku leeyahay Face book wuxuu uu yidhi
Waxaa aad iiga yaabiyey in maalintii Qaranimadda Somaliland in TVga Qaranka laga jaray markii qudbadayddu soo gashay ee si toos ah ama LIVE looga daawan lahaa. Goobtu waxay ahayd London runtiina habeen farxad leh bay ahayd, masuulka qaran Ee ugu sareeyana waan ahaa oo weliba afka madaxda dalka ku hadlaayey, dadka hanbalyo iyo taariikhda Somaliland uun baan la wadaagayey.
Laakiin halka ay ka gaadhay Ninka TVga Qaranka Ugu sareeya London Wuxuu si badheedh ah u fuliyey amarka xukuumaddiisa ee ahaa in sidaasi ay sameeyaan. Runtii waa nasiib daro in masuuliyiintii Kulmiye ay halkaasi la marayso in TVgii qaranka Ee la wada lahaa in si gaar ah loo isticmaallo oo madaxdii xisbiyadda Qaran maalintii Ugu mudneyd Ee 18th May sidan oo kale laga yeello. Sidoo kale Masuuliyiinta xisbigga UCID ee Gobolka Saaxil ayaan maqlaayey in xuskii 18th May loo diiday in Xisbi qaran ahaan loo diiday in ay shacabkii Somaliland hanbalyeeyaan, laakiin xuska 18th May darteed ayaanu ku dhaafnay oo dib baynu iskaga Iman doonaa arrimahaasi inshallah.